Peixinhos Meninos Project
Waxaan rabnaa Website-ka rasmiga ah ee berekekê inuu noqdo goob ay ku kulmaan kuwa dareema sida kuwa jecel muusikada iyo farshaxanka guud ahaan.
Tani waa bilowga meerto cusub. Waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno bixinta wararka waxaanan kugula talineynaa inaad la socoto maaddaama lagu daabici doono boggan.
Our jacayl diirran
Daawashada: album -ka ARQUITEXTURA 2020
Hoos ka daawo ajandaha
Xiisaynaya album kasta, nala soo xiriir.
Architecture 2020 wuxuu ahaa album raadinaya waaya -aragnimo dhawaaqa cusub. Waxaan ka nimid ku dhowaad afar sano oo abaar ah, taas oo berekekê ay ku aragtay gabaabsi iyo awood la'aan si loo helo qaaciidooyin cusub oo ku jira halabuurka.
Albaabku waa isku -darka ereyada qaab -dhismeed iyo qaab -dhismeed, maaddaama ay u heellan tahay dhismayaasha qaarkood, aadami ahaan, aad u dabiici ah oo laga soo shaqeeyay tayada maaddada.
Waxaan hore u dareentay la album this fasax ku dhawaad total la biyaano iyo xitaa qaar ka mid ah alaabtii in uu qayb ka mid ah uu joogtada compositional ahayd.
Khayraadka uu isticmaalay halabuurku wuxuu ku salaysan yahay maktabadaha dhawaaqa leh, duubista aaladaha dhawaaqa, dhawaaqyada dabiiciga ah ee dhiirrigeliyay shaqooyinka Murray Schafer, oo dhowaan geeriyooday. Waxaan dooneynaa durdurradaan inay siiyaan aqoonsi shaqadooda.
Glaciel skywalk: mid ka mid ah aragtiyada ugu cajiibka badan meeraha ayaa ku yaal Kanada.
Dhacdadan oo kale ma seegi karto halo jacayl. Qaybta waxaa lagu sameeyaa muuqaalo kala duwan.
• dabaysha iyo shimbiraha
• fanaaniin matalaya haybadda iyo cabbirka meel weyn
• meesha echo ay ka taliso
• mawduuc taabanaya samada
• malaa'ig baa heesaysa
• Mawduuca xidhitaanka (nooca orchestral ee kii hore)
Del 3 al 6 Torre Eiffel
Del 6 al 9 Casa de chocolate
Del 9 al 12 Cuevas de Nerja
Del12 al 15 Templo
Del 15 al 18 Catedral
Del 18 al 21 Cuerpo
Del 21 al 24 Colmena
Del 30 al 3 octubre Tao Zhu Yin Yuan
Del 3 al 6 Tetramelaceae
Del 6 al 9: Pamukale
Del 9 al 12 Cañón del antílope
Del 12 al 15 Krzywy Domek
Del 15 al 18 G.A.D.U.
Del 18 al 21 Glecier skywalk
Laga bilaabo 3 ilaa 6 Eiffel Tower
Laga bilaabo 6 ilaa 9 Guriga Shukulaatada
Laga bilaabo 9 illaa 12 Godadka Nerja
Laga bilaabo 12 ilaa 15 Macbudka
Laga bilaabo 15 ilaa 18 Cathedral
Laga bilaabo 18 ilaa 21 jir
Laga bilaabo 21 ilaa 24 Beehive
Laga bilaabo Oktoobar 30 illaa 3 Tao Zhu Yin Yuan
Laga bilaabo 3 illaa 6 Tetramelaceae
Laga bilaabo 6 illaa 9: Pamukale
Laga bilaabo 9 ilaa 12 Canyon Antelope Canyon
12-15 Krzywy Domek
Laga bilaabo 15 ilaa 18 GADU
Laga bilaabo 18 illaa 21 Glecier skywalk
Qayb ahaan ama wadarta taranka mid kasta oo ka mid ah raadadka laga sii daayo barnaamijyadan hawada furan, iyo sidoo kale tallaabo kasta oo kale oo ku xadgudba xuquuqda daabacaadda, waa gebi ahaanba mamnuuc. Isticmaalka aan habooneyn waxaa la horkeeni doonaa maxkamadaha awooda u leh.